Lughaya Rdio Golis
Golaha degmada Saylac ayaa maanta xilkooda loo dhaariyey waxayna doorteen Guddoomiyaha ama Duqa degmada Saylac iyo kuxigeenkiisa, doorashada ayaa timid kadib murran xoogan oo ka dhashay cidii qaban lahayd hogaanka degmada Saylac.
Doorashadii dhawaan ka dhacday deegaanada Soomaaliland ayaa natiijo cusub ka dhalisay degmada Saylac oo ay inta badan Golaha deegaanka ku guuleysteen xubno kasoo jeeda beesha Gadabuursi halka horey degmada Saylac u maamuli jireen siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha Ciise.
Natiijadan ayaa waxaa dood weyn ka keenay Nabadoonada iyo Siyaasiyiinta beesha Ciise oo ayagu natiijada doorashada ka horyimid. Xubnaha kasoo jeeda beesha Ciise ayaa sidoo kale diiday inay ka qeyb qaataan doorashada Guddoomiyaha Golaha cusub ee degmada Saylac.
Xukuumada Soomaaliland ayaa wafdi balaaran oo ka kooban 7 wasiir uuna hogaaminayo Madaxweyne kuxigeenka u dirtay degmada Saylac si ay arrintan u dhex dhexaadiyaan. Waxaa sidoo kale soo baxayey warar sheegaya in Dowlada Jabuuti ay arrintan faraha lasoo gashay.
Murrankan ayaa sidoo kale keenay mudaharaadyo rabshado wata oo ka kala dhacay magaalooyinka Saylac iyo Boorama oo uu qof rayid ah ku dhintay.
Maanta ayaa lagu guuleystay in la dhaariyo Golaha Deegaanka Saylac, ayagoo markaasi doortay Guddoomiyaha iyo kuxigeenkiisa cusub.
Xuseen Iidle Barkhadle ayaa loo doortay Guddoomiyaha ama Duqa degmada Saylac halka kuxigeenkiisa loo doortay Sacad Daahir Cige, arrintan oo soo afjareysa murrankii xooganaa ee ka yimid natiijadii doorashadii Saylac oo noqotay mid taariikhi ah.
Kadib doorashada Mayorka cusub ee Saylac iyo kuxigeenkiisa ayey boqolaal shacab ah isugu soo baxeen bartamaha magaalada Boorama ee xarunta gobalka Awdal kuwaasi oo u damaashadayey doorashada Guddoomiyaha Saylac iyo dhaarinta golaha deegaanka degmada Saylac.
�2007 Djiboutination web design. All Rights Reserved.